Yaman: carruurta ku dhimanaysa duqaynta Isbahaysiga Sacuudiga (Warbixin cusub) – Kasmo Newspaper
Yaman: carruurta ku dhimanaysa duqaynta Isbahaysiga Sacuudiga (Warbixin cusub)
Updated - August 23, 2017 10:58 am GMT
London (Kasmo), Isbahaysiga Sacuudigu hoggaamiyo ee dagaalka Yaman oo taageero military iyo saadba ka hela Maraykanka iyo Britain ayaa lagu eedeynayaa mas’uuliyadda geerida 51% carruurta ku dhimatay dagaalka Yaman 2016kii.
Sidaasna waxay ku qorantahay warbixin si qarsoodi ah u soo dustay oo Qarammada Midoobay dhowaan diyaarisay loona gudbin doono Golaha Ammaanka marka uu saxiixo Xoghayaha Guud, Antonio Guterres.
Arrintu waxay salka ku haysaa Qaraarkii 1379 ee 20kii Nofembar 2001dii, kuna saabsanaa badbaadinta carruurta ku sugan goobaha dagaalladu ka socdaan ee dunida iyo diiwaangalinta waxyeellada ka soo gaarta Xukuumadaha iyo Ururrada hubaysan.
Warbixinta waxay ka hadlaysaa xaaladaha carruurta ku nool goobaha dagaalladu ka socdaan, waxaana ku jira dalal iyo Ururro lagu eedeynayo askaraynta, dilalka, kufsiga iyo afduubka carruurta intaba, sannadkii 2016kii waxaa sare u kacay gaboodfalladas oo ka dhacay dhowr dal.
Nuqul ka mid ah Warbixintaas oo 41 bog ah soona gaartay Wargayska Foreign Policy wuxuu ka hadlayaa xadgudubyada xoogagga Xukuumadda, argagixisada iyo mucaaradka hubaysan u geysteen carruur gaaraysa 15,500 oo 4,000 oo ka mid ah waxyeello ka soo gaartay Xukuumadda, halka 11,500, gaboodfallada, loo aanaynayo ururro argagixiso ama kacdoommada kale.
Foreign Policy waxaa lagu xusay in Isbahaysiga Sucuudiga lagu eedeeyay geerida in ka badan 349 ilmood, laguna dhaawacay 333 kale, muddada warbixinta la qoray gudaheeda. Isbahaysigu wuxuu kale oo burburiyay 28 goob oo waxbarasho, isaga oo 4 dalool oo 3 meelood weerarrada lagu bartilmaameedsaday kaabayaasha rayidka ee dalka Yaman.
Xoghayaha Guud ee Q.M. Antonio Guterres, wuxuu go’aamin doonaa in Isbahaysiga Sacuudiga lagu daro liiska madow ee dalalka ku xadgudba xuquuqda carruurta ee Warbixinta ku lifaaqan iyo in kale.
Sannadkii hore, Ban Kii-Moon ayaa Isbahaysigaan, si ku-meelgaar ah, ugu daray liiska, waxaase laga saaray si mar dambe dib u-eegis loogu sameeyo, sida Al-Jazeera sheegaysana waxaa looga saaray dalalka Isbahaysiga oo ku hanjabay in ay joojin doonaan maalgalinta barnaamijyada Q.M. qaarkood.
Xitaa sannadkaan, si loogu daro liiska, Xoghayaha Guud Guterres waxaa horyaalla kala doorashada laba daran midkood: haddii lagu daro waxaa dhici kara Q.M. iyo xukuumado Carbeed oo muhiim ah in ay kala go’aan. Haddi an lagu darinna waxay keeni kartaa in meel looga dhacayo xannaanadii xuquuqda Aadanaha.